नखेल्नु जुवा र तास... - Jhilko
नखेल्नु जुवा र तास...
४ आश्विन,२०७६ 456 0
फणीन्द्र फुुयाल ज्वाला
हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड दशैँ नेपालीहरुको घर आँगनमा भित्रिएको छ । देशका बिभिन्न स्थान र सहरहरुमा रोजगारी, अध्ययन, श्रम आदि गर्न गएकाहरु दशैँमा परिवारसँग भेला भएर मिठो मसिनो खाई राम रमाइलो गर्ने योजना बुन्दै घर गाउँ फर्किन सुरु गरेका छन् । केही सहर बजारमा बस्नेहरु भने दशैँको लागि घर फर्किने बसको टिकट जोहो गर्न थालेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि दशैँ–तिहार मान्नकै लागि स्वदेश फर्किन थालिसकेका छन् ।
असोजको तेस्रो साता सुरु हुनै लाग्दा अझै पनि वर्षा रोकिएको छैन । मौसमबिद्हरुले यो वर्ष हिले दशैँ होला जस्तो छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् । स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थीहरुको दैनिक अध्ययन गर्न जाने मेलो घटस्थापनादेखि बन्द भइसकेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सेवा कार्य भने जारी नै छ ।
उता गाउँ घरमा भने दशैँको लागि भनेर घरमै पालिएको घोर्ले दशैँ खसि दैनिक रुपमा चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । यति धार्नि र उति धार्नि होला भनेर तल्ला घर, माख्ला घर, वल्ला घर र पल्ला घरका छिमेकीहरु बिहान बेलुकी आँगनमा भेला भई खसि मुसार्ने, उचाल्ने र नापजाँप गर्ने कामले तिब्रता पाएको छ । घर टालटोला पार्ने, लिपन पोतल गर्ने अनि कमेरो र राटमाटो ओसार्ने काम सुरु भएको छ । घरलाई चिटिक्क बेहुली जस्तै पारेर सिँगार्न बरण्डा, झ्याल, ढोका, खापाहरुमा मसला (पावर) सकिएको बेट्रीको कालो दल्ने, बजारिया रंगहरु किनेर ल्याई दल्ने काम पनि त उस्तै तामझामकासाथ हुँदै होला !
दशैँ र जुवा, तास अनि मादक पदार्थ (जाँड, रक्सी) सेवन आजकल एकापसमा पर्याय जस्तै बनेका छन् । परापूर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरुमा चाड पर्व र रक्सी संस्कृती र संस्कार नै भएपनि सबै जतजातिका लागि दशैँमा रक्सी सेवन भने अनिवार्य, पर्याय र संस्कृति होइन । तर दशैँमा लुकि लुकि भएपनि जाँड रक्सी सेवन गर्नै पर्ने गलत संस्कारको विकास हुँदै जाँदा दशैँ संस्कार र संकृती मान्ने पर्व मात्र नभई खुलम खुला रुपमा बिकृति गर्न पाइने पर्वका रुपमा पनि कतिले बझ्ने गरेका छन् ।
त्यसोतः दशैँ मान्नकै लागि विदेशबाट स्वदेश फर्किने अधिकाँश नेपालीहरुले आफ्नो साथमा विदेशी वाइन वा रक्सी लिएर आउने गरेका पनि छन् । साथीभाई र घर परिवारका सदस्यहरु वर्षौँपछि भेटघाट हुँदा रमाइलो गर्ने साधनका रुपमा रक्सी, तास र जुवालाई पनि लिने गरिएको छ । तर दशैँको बहानामा यसरी रक्सी सेवन गरी उत्तेजित भएर जुवा, तास र कौडा खेल्दा धेरै जन धनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ । त्यसतर्फ सबै सचेत हुन भने जरुरी छ ।
सरकारले पनि दशैँ, तिहार र छठकै लागि भनेर बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । बजारमा अधिकाँश खाद्य सामाग्रीमा मिसावट हुने गरेको सर्वसाधारण जनताबाट गुनासो आउन थालेपछि सरकारले बजार अनुमगन कार्यलाई अन्य समय भन्दा विशेष ध्यान दिन थालेको हो । चाडपर्वको अवसर पारेर चोरी डकैतीका घटनाहरु अत्याधिक मात्रामा बढोत्तरी हुने हँुदा गृह मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रहरी पचारिलन गरी सम्भावित घटनालाई न्यूनिकरण गर्न लागिपरेको छ । लामो दुरीका सबारी साधनका यात्रुलाई राजमार्गका होटलहरुमा बासी र सडेगलेका खाना खुवाउने बिगतको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता होटलहरुको खानामा गुणस्तरीय जाँच गर्नुपर्ने अर्को आवश्कता छ । यसका लागि केन्द्र सरकारको पहलमा मात्र यो जटिल कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वय गरेर आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जो सुकै ठग मानसिकता भएको व्यक्तिलाई उचित कानूनी कारवाही गर्न सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । देशमा सुशासन कायम गर्ने बहानामा कसैले पनि नातावाद, कृपावाद, राजनीतिकरणका आडमा गलत कार्य गर्नेहरुलाई बचाउ गर्नु हुँदैन ।
चाड पर्वको अवसर पारेर बिचौलिया र ठगी कार्य गर्नेहरु अन्य समयमा भन्दा बढि सक्रिय हुने भएकाले आम नागरिकले पनि सचेतता अपनाउनु जरुरी छ । यसका लागि हामीले सामाजिक सञ्जालको सही रुपमा प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्छ । यदि हामी दशैँमा किनमेल गर्न वा दशैँ मनाउन पुरै घर नैं तालाबन्दी गरेर जाँदै छौँ भने हामीले त्यस्तो बखतमा घरको ढोकामा ताला लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर आफु यति उति दिनका लागि फलानो ठाउँ जाँदै गरेको छु भनेर पोष्ट नगरेकै जाती हुन्छ । यदि हामीले यस्ता सूचना समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्यौँ भने उक्त सूचना गलत मानसिकता बोकेका मानिसकोमा पनि पुुुुग्छ र उसले मौका छोपेर घरमा चोरी गर्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्ट्याटस पोष्ट गर्नुको सट्टा बरु हामी केही दिनको लागि घरमा तालाबन्दी गरेर बाहिर जाँदै छौँ भने त्यसको सूूचना नजिकैको प्रहरी चौकीमा गएर दिएको खण्डमा हाम्रो घर सहि सलामत रहला ।
चाड पर्वका बेला अधिकाँश सबारी साधनले बढि भाडा लिने गर्दछन् । सरकारले सबै रुटमा चल्ने सवारी साधनमा दशैँका लागि पुुरानै भाडा कायम भएको जनाएको छ । चाडवाडको मौका छोपी बढि भाडा लिन खोज्ने, धम्क्याउने र थार्काउने गाडी चालक र सहचालकका बारेमा पनि प्रहरीलाई मौखिक उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ । गाडिमा ‘रिजर्भ’को बोर्ड टाँसेर ठगि गर्नेहरुको पनि उचित पहिचान गर्न सर्वसाधारणमा ट्राफिक प्रहरीले अनुरोधसमेत गरेको छ । यसका लागि प्रहरीले राजमार्ग, प्रमुुख सहर, सडक र चोकहरुमा यात्रु सहायता कक्ष समेत सञ्चालन गरेको छ ।
दशैँको बेला आम नेपालीको घरघरमा मासुको सेवन पनि अत्याधिक हुुने गर्छ । चिकित्सकहरुले रातो मासुु धेरै नखान सुुझाव दिने गरेका छन् । खसिको रातो मासुले कोलेस्टोर अत्याधिक मात्रामा बढाउने भएकाले कुखुरा, हाँस तथा अन्य चराचुरुंगीको मासुका साथै साग सव्जी पनि उत्तिकै मात्रामा खानुु पर्ने चिकित्सकहरुको सुुझाव छ ।
यदि हामीले वर्ष दिनमा आउने यी चाड पर्वहरुको उचित र सावधानीपूर्वक रुपमा मनाउने बानि बसाल्यौ भने चाड पर्वहरुले हर्षोल्लास भर्ने छ भने पर्वहरुलाई लापरवाहीपूर्वक मनायौँ भने यसले दशा निम्त्याउने पक्का छ । चाड पर्वहरुको हामीले अरुको देखासिकी नगरी आफ्नो गच्छे अनुसार मनायौँ भने पक्कै पनि यो ‘आयो दशैँ ढोल बजाई, गयो दशैँ ऋण बोकाई’ भन्ने उखान जस्तो हुने थिएनकी ? सयमबद्ध साप्ताहिकबाट
उदारीकरणका नाममा आक्रान्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास
रोकिएनन् द्धन्द्ध पीडितका आँसुः चाडपर्ब आउँदा शहिदका घरमा हुन्छ रुवाबासी
१ बैशाख,२०७६0219
भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा रहेको खनिज तेलको निर्यातमाथि अमेरिकी...
‘पाँडेको शालिकले इन्द्रदहको पहिचान छर्लङ्ग’
५ फाल्गुन,२०७५0416
पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
३ मंसिर,२०७६0113
मस्कोमा सोमबार समकक्षी सर्गेइ लाभ्रोभसँगको भेटमा मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी...
अस्पतालमा राजनीति नगर्न मन्त्रीको आग्रह
१ मंसिर,२०७६092
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भरतपुर अस्पतालको निरीक्षण गरी जनतालाई...